Kukho inkolelo yokuba imbongo yabantwana baseBrithani 'Bhala iRose Roses' yinto yesibetho - mhlawumbi iSigqeba esikhulu se-1665-6 okanye i- Black Death eminyaka ngaphambili - kunye nemihla evela kuloo mihlaba. Amagama achaza indlela eyenziwa ngayo ngexesha lokunyanga, kwaye ibhekisela ekupheleni kokufa.
Ukusetyenziswa kokuqala kwesiqhelo yinkqubo yama-Victorian, kwaye ngokuqinisekileyo ayisayi kubuyiselwa kwisibetho (nawuphi na kubo).
Ngoxa iingoma zikwazi ukutshintshwa njengezixhomekeke ngokukhululekile ekufeni nasekukhuselweni kwesibetho, oku kukholelwa ukuba yiyo loo nto, ukuchazwa okwenziwe kwiphondo lama-20 ngabavakalisi abakhulu kakhulu, kwaye abayiyo imbangela ngqo yeso sifo, nokuba nantoni na uyenze nalo.
Kukho ukuhlukahluka kwamagama kwiimvumi, kodwa ukuhluka okuqhelekileyo kukuba:
Bhala indandatho i roses
I-pocket egcwele iingxaki
Sonke siwa phantsi
Umgca wokugqibela uvame ukulandelwa yiimvumi, ngokuqhelekileyo abantwana, bonke bawela phantsi. Ngokuqinisekileyo unokubona ukuba indlela eyahlukileyo isandi ngathi ingaba yinto enokuyenza ngayo isibetho: iimizila ezimbini zokuqala njengezibhengezo kwiintlobo zeentyantyambo kunye neentyambiso abantu ababesigqoke kuzo ukukhusela isibetho, kunye nemigca emibini ekubhekiselele kwisifo (sneezing) kwaye emva kokufa, ukushiya imvumi efile emhlabeni.
Kulula ukubona isizathu sokuba isingqisho sinokuqhagamshelaniswa nesibetho.
Iyona edume kakhulu ngalawa yi-Black Death, xa isifo sagqitywa kwiYurophu ngo-1346 ukuya ku-53, ngokubulala ngaphezu kwesithathu sabemi. Uninzi lwabantu bakholelwa ukuba le nto yayisifo se-bubonic, esibangela ukuba ixhoba elimnyama lixhomekeke kwixhoba, libize igama, nangona kukho abantu abayichitha le nto. Isibetho sazisasazwa yi-bhakteria yasasazwa yi-fleas kwiinqongi kwaye yabhuqa iItrans-Isles ngokubanzi njengelizwekazi laseYurophu.
Umbutho, uqoqosho kunye nemfazwe yatshintshwa yeso sibetho, ngoko kutheni ukuba loo nto isingenakuyenza loo mcimbi kunye neyoyikrakra ngokuzibandakanya koluntu kwimiqulu? Umlingo kaRobin Hood umalunga nokudala. Isiqulatho sidibene nenye ingqungquthela yesibetho, i-'Ball Plague 'ka-1665-6, kwaye ngulo olwabonakala emile eLondon ngoMlilo Omkhulu ovutha indawo enkulu edolophini. Kwakhona, kukho iimbali eziqhubekayo zomlilo, ngoko kutheni kungabi nesingqungquthela ngesibetho? Olunye uhlobo oluqhelekileyo kumagama luquka 'umlotha' esikhundleni sokuthi 'atishoo', kwaye uguqulelwe njengokutshisa izidumbu okanye isikhumba sokumnyama esikhwameni.
Nangona kunjalo, iifolklorists kunye neembali-mlando ngoku bakholelwa ukuba isibetho sesibango sithatha kuphela kwiphondo lemashumi amabini xa sathandwa ukuba sinike iziqhyqatho ezikhoyo kunye namazwi asekudala. Isiqulatho saqala ngexesha lama-Victorian, imbono eyayiyintlupheko ehlobene nayo yaqala kuphela emashumi embalwa edlulileyo. Nangona kunjalo, ukusabalalisa kwakukho isingeniso eNgilani, kwaye ingqalelo ekujuleni kolwazi lwabantwana, ukuba abaninzi abantu baxhomekeke kwisibetho.
Iintaba eziphakamileyo kwihlabathi
Ngaba Ixesha Lakho Elidlulileyo-I-Karma Yobomi Ichitha Ubomi Bakho?
Iingoma ezigqwesileyo zikaBol Dylan
Ukubhaliweyo Ukunyusa - Ukulwa nokulwa
Ukunyanga izilwanyana ze-Jellyfish kunye nezilonda ze-Man-o-War
Iifayile zeGalofu zenziwe njani?
Kuthetha ukuthini ukuba ngummeli okhululekileyo kwi-NFL
Iimpawu zeBlaschko kunye nezithintelo ezingabonakaliyo kwi-Skin Skin